Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na mkpịsị aka gị bewara?
Ahụ ike ụmụ nwanyị Ndi mmadu
Onye ọ bụla maara na ị gaghị edozi oriri kwesịrị ekwesị, na-enweghị nri na elu, ihe ndị a na-ese anwụrụ ọkụ, sausages, anụcha buru ibu, okpukpu abụọ nke salads. N'ụbọchị ezumike ahụ, njedebe na-aghọ nnukwu ibu. Ma, ọ dị mwute na enwere mmerụ ụlọ ọrụ na mmepụta ọ bụla. N'ime ogige nke narị afọ nke 21, ruo ogologo oge ka e mepụtara ngwaọrụ, usoro ụlọ na-eme ka ndụ dịkwuoro mmadụ mfe. Ma eleghị anya ọ bụ oge ịkwụsị ịzọpụta ndị dị gị nso na gị onwe gị? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ntuziaka n'ihe gbasara ọdịbendị karịa na-arụ ọrụ na wiil eletrik, ndụmọdụ ndị a bụ maka gị.
Ya mere, ọ gbanwere, mma ahụghị ebe ahụ wee hapụ nick na mkpịsị aka gị. Na mkpịsị aka ahụ, ọ dịghị arịa ndị dị oké mkpa, n'ihi ya, echela ha. Iji belata ọbara nke ọbara, bulie aka gị elu.
Ọ dịghị mkpa maka nhụjuanya nke mgbu na nzube nke ịsacha ọnya ahụ iji dochie mkpịsị aka, nke a na-ebipụ, n'okpuru mmiri oyi. Emela nke a, n'ihi na nke a na-eme ka o sie ike ịkwụsị ọbara ọgbụgba ma ọ bụ ka njọ, ọ ga - enyere gị aka itinye aka gị aka. E kwesịghị ileghara mmerụ ahụ anya, ebe ọ bụ na onye isi America bụ President James Garfield nwụrụ site na mkpịsị aka ya, n'ihi nsị nsị.
Ma mgbe ahụ, anyị bụ ndị mepere anya, anyị nwere ihe enyemaka mbụ n'ime ụlọ. A na-edebe ya ma jupụta n'ụdị ọgwụ osisi dị iche iche na ụzọ nchebe. Plasta, antiseptics, bandages - ọ bụ ihe niile dị. Gaa na mkpịsị aka. Ọrụ mbụ bụ iji chebe ọnyá site na ọrịa. N'ebe a, ị ga-achọ mmezu nke usoro ọgwụ na oge a.
M na-ehichapụ akpụkpọ ahụ na-agba ya na iodine, emetụla ọnya ahụ n'onwe ya, ọ ga-eme ka ahụ sie ike ma gbuo mkpụrụ ndụ ndụ. Iji saa ọnya ahụ, hydrogen peroxide dị mma. Ị pụghị itinye aka mmanu ichthyol, ọnya Vishnevsky na mmanụ ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ.
Kedu ihe ị chọrọ ugbu a? Ejila akwa bandeeji sie ike. Enwere otu uzo ebe a. Ọ bụrụ na ị kechie mkpịsị aka gị, yabụ, n'agbanyeghị otú ike si dị anyị, n'ihi ụlọnga n'ozuzu ya, ọ ga-abụ mwute, "nchegbu" ma ka na-agba ọbara n'okpuru mgbakwunye ahụ. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ ahụ dị omimi, mgbe ahụ, ụfụ ahụ nwere ike ịda mbà. Na mgbakwunye, mgbe ọ dị mkpa iji bandee ọnya ahụ, ọ gaghị adị mfe iji wepu bandaji a, ma ọ bụghị ihe na-egbu mgbu.
Iji gbochie nke a na-eme, anyị na-etinye obere ntan. Mgbe i kpochasịrị elu, tinye otu akwụkwọ na mkpịsị aka nke mebiri emebi, n'ihi na nke a, jisie ike kechie akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ na ọnya ma jiri mgbanaka bactericidal ma ọ bụ bandeeji mee akwa bandeeji. Lubok akwụkwọ nwere ike idozi akụkụ nke ịkpụ, nke agaghị ekwe ka ha kesaa mgbe ha na-akwagharị. N'ihi ya, ọnya ahụ ga-eme ngwa ngwa, ọ ga-adịkwa ka ọ gaghị ahụ ya. Mgbe ọ dị mkpa iji bandee ọnya ahụ, ọ ga-adị nnọọ mfe ịkewapụ bandeeji ahụ na akwụkwọ. A ga-ewepụ akwụkwọ ahụ n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ dị nro nke furacilin ma ọ bụ mee ka ọ dị ọcha na perogenide hydrogen.
N'ezie, ị ghọtara na ọ bụghị akwụkwọ ọ bụla kwesịrị ekwesị maka nzube ndị a. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ ozi akụkọ na ink edere nwere ọtụtụ ogige ndị na-emerụ ahụ. Akwụkwọ na-acha ọcha nke kachasị mma maka onye nbipute, disinfected na peroxide.
Ọ na-eme gị obi ụtọ.
Esi chebe onwe gị site na oyi
Ọgwụgwọ nke ịmịnye ọgwụ na ọgwụ ndi mmadu
Iwu na ihe nzuzo nke ụra ọma
Njirimara ngwọta nke plantain na uru nke ụzọ dabere na ya
Oge nlekọta ahụike: April, May, June, July
Kedu ka esi tufuo nrekasi obi, olee ụzọ e si agwọ ọrịa?
Ohia osikapa na tofu na tomato
Kobler na rhubarb
Nnukwu nhicha: anyị na-ehicha akpụkpọ ihu
Salad si squid
Ksenia Sobchak mere ka onye ọ bụla nwee mgbagwoju anya na ime ime ya, foto
Nri ude na broccoli na poteto
Antonio Banderas na Melanie Griffith gbara alụkwaghịm
Ịṅụ sịga n'oge uto, otu esi emeso ya
Akụ na kabeeji Pekinese
Nwoke a mụrụ n'afọ nke ewu
Mbibi nke ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ site n'ụzọ pụrụ iche
Bara uru Njirimara nke apụl cider mmanya
Ezumike ezumike na Turkey
Eberi ogwu osere
Masks maka ihu mmanụ aṅụ n'ụlọ
Green agwa flan
Ugbo ogwu oku Po Vilkowski
Usoro mmemme maka ụmụ nwanyị